ဆောင်းရာသီနဲ့နွေရာသီကာလအတွင်းပဲရစ်မှာတော့ Disneyland အပန်းဖြေ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား > ဆောင်းရာသီနဲ့နွေရာသီကာလအတွင်းပဲရစ်မှာတော့ Disneyland အပန်းဖြေ
ဆောင်းရာသီနဲ့နွေရာသီကာလအတွင်းပဲရစ်မှာတော့ Disneyland အပန်းဖြေ
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 24/04/2020)
Disneyland ပဲရစ်မကြာခဏပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါတယ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ များစွာသောပရိတ်သတ်တွေသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်အဘို့အဒစ္စနေးပန်းခြံ. သင်သိချင်ပါနဲ့ ဆောငျးရာသီနဲ့နွေရာသီကာလအတွင်းပဲရစ်မှာအကောင်းဆုံး Disneyland အားလပ်ရက်စီစဉ်ဖို့ဘယ်လို? ထိုအခါသင်သည်လက်ျာအရပ်မှလာပါတယ်! Marne-la-Vallee မှာတည်ရှိပါတယ်, ပဲရစ်မြို့ရဲ့ဆင်ခြေဖုံး, Disneyland ပဲရစ်အကြောင်း 45 ရထားအားဖြင့်မြို့လယ်ကနေမိနစ်. တစ်ခုလုံး သွားရောက်ရာအရပ် ပါဝင်ပါသည်7တာဝန်ရှိသူတဦးကဒစ္စနေး-အခြေတည်ဟိုတယ်များ, အတော်ကြာမိတ်ဖက် ဟိုတယ်များ, အဆိုပါဒစ္စနေးကျေးရွာဖျော်ဖြေရေးနှင့် စျေးဝယ်ခရိုင်, ထိုသူနှစ်ယောက်ဥယျာဉ်: Parc Disneyland နှင့်ဝေါ့ဒစ္စနေး Studios ကပန်းခြံ. သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့စိတ်လှုပ်ရှား? ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့အချို့ကိုဝေမျှ အကောင်းဆုံးအကြံပေးချက်များ တစ်ဦးကြုံနေရများအတွက် ဆောငျးရာသီ Disneyland ပဲရစ်မှာတစ်ရက်သို့မဟုတ်နွေရာသီအားလပ်ရက်.
သင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဥရောပသွားရောက်လည်ပတ်နေတယ်ဆိုရင်, သင်သည်အဘယ်ကြောင့်ဥရောပသွားရောက်လည်ပတ်နေလျှင်သင်လက်လွတ်မနိုင်သလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းမရှုမွငျ: ဒီမှာ
ဆောင်းရာသီနှင့်နွေရာသီကာလအတွင်းပဲရစ် Disneyland အပန်းဖြေအကြောင်းမကြာမီကသတင်း
Disneyland ပဲရစ်စိတ်ကူးရှာဖွေနေတာဖြစ်ပါတယ်! ဒီအပေါ်မှာလမ်းညွှန်ဖြစ်ပါသည် ဆောငျးရာသီနဲ့နွေရာသီကာလအတွင်းပဲရစ်မှာအကောင်းဆုံး Disneyland အားလပ်ရက်စီစဉ်ဖို့ဘယ်လို, ဒါပေမယ့်တိုင်းအတွက်ရိုးသားစွာအံ့သြဖွယ်င် ရာသီ. မကြာသေးမီက, အဆိုပါဒစ္စနေးပဲရစ်နှစ်ပတ်လည်နေ့ရှေ့တော်၌ထိုအကြီးစားပြင်ဆင်ပေးခြင်းကိုကျေးဇူးတင်, ပန်းခြံတာက၎င်း၏မူရင်းဘုန်းပြန်ထားသည်. အဆိုပါအခမ်းအနားကိုယ်တိုင်ကအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကောင်းသောသတင်းရှိသေးရဲ့. အသစ်ကဖျော်ဖြေရေးအများစုဟာတည်းခိုနေသည်! ရေး! ဒါဟာအစနောက်ထပ်နှင့်အတူဖြည့်ဆည်းပါလိမ့်မည် ဟယ်လို ယခုနှစ်နှစ်ကုန်မှတဆင့်ခြင်းနှင့်ခရစ္စမတ်ဖျော်ဖြေရေး.
သငျသညျအစောပိုငျးတှငျသှားရောကျကွညျ့ရှုစဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင် 2019, အဆိုပါအင်အားစု Star Wars အဖြစ်အပျက်၏ Legends ဇန်နဝါရီလပြေး 12 မတ်လမှ 17, 2019, နှင့် Pirates & မင်းသမီးပွဲတော်ဇန်နဝါရီလရာအရပ်ကိုကြာမြင့်မည် 19 မတ်လမှ 17, 2019. ပြီးနောက်, စူပါ-သူရဲကောင်းများ၏အံ့ဩခြင်းရာသီမတ်လကနေ run ပါလိမ့်မယ် 23 ဇွန်လရန် 16, 2019, နှင့်ခြင်္သေ့ ရှငျဘုရငျ နှင့် Jungle ပွဲတော်စက်တင်ဘာလမှဇူလိုင်လပေါ်ပေါက်လိမ့်မယ် 2019, အဆိုပါဟယ်လိုခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်နဲ့ ခရစ္စမတ် ရာသီ.
ပဲရစ် Disneyland Marne-la-Vallee ရထားမှ
Disneyland Marne-la-Vallee ရထားမှဘရပ်ဆဲလ်
လီယွန်လေဆိပ်မှ Disneyland Marne-la-Vallee ရထားများ
Disneyland Marne-la-Vallee ရထားမှလိုင်လီ
တဲ့အခါသင် DISNEYLAND ပဲရစ်လာရောက်လည်ပတ်သင့်?
သင်တစ်ဦးရေရှည်စီမံနေနှင့်သင်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလနဲ့နွေရာသီကာလအတွင်းပဲရစ်၌သင်တို့၏ Disneyland အားလပ်ရက်များအတွက်အပြည့်အဝပြင်ဆင်ဖြစ်လိုလျှင်, သို့ဖြစ်လျှင်ဤအချက်အလက်သင်ပြုံးစေမည်. Disneyland ပဲရစ်အံ့ဩခြင်းပါဝင်ပတ်သက်နေကြောင်းယင်း၏ရေရှည်အစီအစဉ်များကိုကြေညာခဲ့သည်, star Wars, နှင့်တစ်ဦး၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် Frozen $2.5 အဆိုပါဝေါ့ဒစ္စနေး Studios ကပန်းခြံမှဘီလီယံကိုပြန်လည်ရှင်သန်ရေး.
ဝေါ့ဒစ္စနေး Studios ကပန်းခြံ၏ဤ Multi-တစ်နှစ် redevelopment အတွက်စတင်အဆင့်ထွက်လှိမ့်ပါလိမ့်မယ် 2021. ဒါတောင်မှ, ကသေးငယ်ဒြပ်စင်ကြောင်းအကွာအဝေး၏အစောပိုင်းအဆုံးအပေါ်ဖွယ်ရှိကြောင်းအလွန်အမင်းဖွယ်ရှိင်. ချဲ့ထွင်၏အမြောက်အများရှေ့ဆက်ပဲရစ်၏ culminate ပါလိမ့်မယ် 2024 နွေရာသီအိုလံပစ်.
အဆိုပါဟိဂ် Disneyland Marne-la-Vallee မှရထား
Disneyland Marne-la-Vallee ရထားမှ Maastricht
Disneyland Marne-la-Vallee ရထားမှ Cologne
Disneyland Marne-la-Vallee ရထားမှ Frankfurt
အဆိုပါ ရာသီဥတု ပဲရစ်မှာမတ်လဝန်းကျင် /ဧပြီလ, နှင့်နိုဝင်ဘာလမှတစ်ဆင့်စက်တင်ဘာလအေး, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကပျော်မွေ့! ဤနှစ်အများဆုံးသမအကြိမ်များမှာ, ပင်ပြုလုပ်နိုင်သော်လည်း မိုးပွင့် ဆောင်းတွင်းမှာ, ဒါကြောင့် Mid-နိုဝင်ဘာလအတွင်းများသောအားဖြင့်လည်းအအေးမယ့်. (mid-To-ဒီဇင်ဘာလနှောင်းပိုင်းသင့်ရဲ့ကံတွန်းအားပေးစေခြင်းငှါ, သော်လည်း။)
သငျသညျအစောပိုငျးတှငျသှားရောကျကွညျ့ရှုစဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင် 2019, အဆိုပါအင်အားစု Star Wars အဖြစ်အပျက်၏ Legends ဇန်နဝါရီလပြေး 12 မတ်လမှ 17, 2019, နှင့် Pirates & မင်းသမီးပွဲတော်ဇန်နဝါရီလရာအရပ်ကိုကြာမြင့်မည် 19 မတ်လမှ 17, 2019. ပြီးနောက်, စူပါ-သူရဲကောင်းများ၏အံ့ဩခြင်းရာသီမတ်လကနေ run ပါလိမ့်မယ် 23 ဇွန်လရန် 16, 2019, နှင့်ခြင်္သေ့မင်းကြီးသည်နှင့် Jungle ပွဲတော် စက်တင်ဘာလမှဇူလိုင်လပေါ်ပေါက်လိမ့်မယ် 2019, အဆိုပါဟယ်လိုနှင့်ခရစ္စမတ်ရာသီအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်.
ခရစ္စမတ် DISNEYLAND ပဲရစ်
ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမပါဘဲ, အများဆုံး ရွှင်မြူးစေတတ်သော စတင်ချိန်မှာအသုံးပြု Disneyland ပဲရစ်သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့အချိန်နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်နိုဝင်ဘာလန်းကျင်ခရစ္စမတ်-မှန်သည်. ထုံးစံအတိုင်း, ဒစ္စနေးရဲ့ဝိဇ္ဇာအတတ်အားခရစ်စမတ်အစောပိုင်းဇန်နဝါရီလမှတဆင့်အစောပိုင်းနိုဝင်ဘာလကနေပြေး. ဒါဟာအချို့အပိုဆောင်းရာသီအလိုက်ဖျော်ဖြေရေးအဘို့အ Disneyland ပဲရစ်သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါသည်, လူအပေါင်းတို့ပန်းခြံတဝိုက်လှပတဲ့အလှဆင်ဘို့. Plus အား, သင်၏ခံစားရိုက်နှက်မနိုင် ပဲရစ်၏စီးတီး အားလပ်ရက်လအတွင်း.
Disneyland Marne-la-Vallee ရထားမှစတုဂတ်
Disneyland Marne-la-Vallee ရထားမှဂျီနီဗာ
Marseille Disneyland Marne-la-Vallee မှရထား
Disneyland Marne-la-Vallee ရထားမှ Luxemburg
ဘယ်နှစ်ရက် Disneyland အပန်းဖြေ FOR ပဲရစ်ဆောင်းရာသီနှင့်နွေရာသီကာလအတွင်း?
သင်တစ်ဦးကြီးမားသောပန်ကာဖြစ်လျှင်, ထို့နောက်တနေ့ကန့်နေသည်. ငါတို့သည်သင်တို့အကောင်းပြေးဖိနပ်ရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်! အကောင်းဆုံးကတော့, သင်အလိုရှိ3Disneyland ပဲရစ်မှာရက်ပေါင်း. Parc Disneyland အတွက်လေ့လာစူးစမ်းဖို့အများကြီးရှိပါတယ်, နှင့်ပန်းခြံမယုံနိုင်လောက်အောင်အသေးစိတ်ဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်ချထားပေးအပေါ်စီစဉ်2သို့မဟုတ် 2.5 ကြောင်းပန်းခြံများအတွက်ရက်ပေါင်းသင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအလောင်းအစားဖြစ်ပါသည်.
လူအများစုဟာတစ်ဝက်တစ်ရက်သို့မဟုတ်တစျနေ့အတွက်ဝေါ့ဒစ္စနေး Studios ကပန်းခြံပြီးမြောက်နိုင်ပါတယ်. တစ်ဦးဌန်ရှိပါတယ် ပျော်စရာဆွဲဆောင်မှု အဲဒီမှာ. သင်သာမှတစျနေ့တှငျရှိသညျဘူးဆိုရင် အတှေ့အကွုံ Disneyland ပဲရစ်, အဆိုပါစတူဒီယိုကိုကျော်သွားနှင့်ရုံ Disneyland ပန်းခြံပြုပါ.
ဆောင်းရာသီ 2019/2020: စာအုပ်အစောပိုင်းနှင့်ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်
ရှေ့ဆက်စီစဉ်လျက်သိမ်းဆည်း, ဆောင်းရာသီအပေါ်အကောင်းဆုံးရရှိနိုင်မှုနှင့်အတူ 2019/2020 ကနေရောက်မှုနှင့်အတူ 7ကြိမ်မြောက် နိုဝင်ဘာလ 2019 သို့ 1St ဧပြီလ 2020. သင့်ရဲ့အိပ်မက်အားလပ်ရက်ကြိုတင် Organize!
Get Up ကိုမှ 25% သင့်ရဲ့ဟိုတယ် off & ပန်းခြံလက်မှတ်အထုပ် *
သင့်ရဲ့နေထိုင်၏တစ်ခုလုံးကိုအရှည်အဘို့အသင်တစ်ဦးဒစ္စနေးဟိုတယ်တွင်သို့မဟုတ်ဒစ္စနေးရဲ့ Davy Crockett Ranch မှာနေဖို့လိုလျှင်.
အဆိုပါဒစ္စနေးပန်းခြံ၌သင်တို့၏နှစ်ရက်အတွင်းမှာသင်က Les ကျေးရွာသဘာဝတရားပဲရစ်မှာနေထိုင်ပါလျှင်.
ဆောင်းရာသီနှင့်နွေရာသီကာလအတွင်းပဲရစ် Disneyland အပန်းဖြေမှာ The Best စီးနင်း
ဤတွင်ငါတို့သည်သင်တို့တစ်ခရီးစဉ်အတွင်းဦးစားပေးသင့်တယ်ထင်ရဲ့ Disneyland ပန်းခြံ. သငျသညျအမေရိကန်ပန်းခြံမှဖူးလျှင်သူတို့ထဲကတချို့ကအကျွမ်းတဝင်အသံပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်လုံလောက်အောင်ကွဲပြားမှုများသောအားဖြင့်ရှိပါတယ် (အတွေ့အကြုံသို့မဟုတ်ဗေဒဖြစ်စေ) ပဲရစ်ရဲ့ဗားရှင်းထူးခြားတဲ့ခံစားမိစေရန်. ဒီမှာကိုအကောင်းဆုံးစီးတဲ့ bewitching အသစ်သောဇာတ်လမ်းလိုင်းနှင့်အတူဂန္ဒစ္စနေးလှည့်ကွက်မှီဝဲတဲ့စစ်မှန်တဲ့တဦးတည်း-of-a-ကြင်နာဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်.
အမ်စတာဒမ် Disneyland Marne-la-Vallee မှရထား
Disneyland Marne-la-Vallee ရထားမှ Antwerp
Disneyland Marne-la-Vallee ရထားမှရိုတာဒမ်
Disneyland Marne-la-Vallee ရထားမှ Strasbourg
10. ဘေး၏ Indiana ပြည်နယ်ဂျုံးစ် et le ဗိမာနျတျော du ဘေး-Indiana ပြည်နယ်ဂျုံးစ်နှင့်ဗိမာန်တော်
8. အဲလစ်ရဲ့ Curious Labyrinth
7. Star Wars Hyperspace တောင်တန်း
6. က Les Mysteres du ကို Nautilus-အဆိုပါပုကို Nautilus ၏နက်နဲသောအရာ
5. အဆိုပါ Taniere နဂါး-အဆိုပါနဂါးရဲ့ Lair
3. Big မိုးကြိုးတောင်တန်း
Disneyland ဆောင်းရာသီနှင့်နွေရာသီကာလအတွင်းပဲရစ်အားလပ်ရက်နှင့်ကမ္ဘာအတွက် Disneyland ၏အလှဆုံးဗားရှင်းအဆင်သင့်? တစ်ဦးအပေါ်ဤနေရာသို့သွားရန် ပဲရစ်ရထား ၏အကူအညီနှင့်အတူ SaveATrain အဘယ်သူမျှမ peaky အပိုဝန်ဆောင်ခ, အရာစီးဘို့ပိုပြီးပိုက်ဆံဆိုလိုတယ်! မိနစ်အတွက်လက်မှတ်ဘွတ်ကင်လုပ်ရန်.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသားယူနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေနဲ့ ကိုယ့် link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးပေး ဤ blog post မှ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/disneyland-vacation-paris/ - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml သင် / pl မှ / ကဖယ်ရှားသို့မဟုတ် / ကိုပြောင်းလဲရန်နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများနိုင်ပါတယ်.
#disneyinsummer #disneylandfrance #DisneyParis disneyland disneywinter europetravel familyholiday trainjourney ရထားအကြံပေးချက်များ travelfrance visitdisney
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ရထားခရီးသွားချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ဥရောပခရီးသွား